Food – Myanmar Myinkwin Zone
အင်းလေးရိုးရာ ပဲချဉ်နဲ့ တူတဲ့ Hummus လုပ်နည်း
အင်းလေးရိုးရာ ပဲချဉ်နဲ့ တူတဲ့ Hummus Hummus ဆိုတာ Arabic တွေ chick peas ကို ခေါ်တဲ့ အမည်ပါ။ ancient Egypt ခေတ်တွေကတည်းက စားသုံးခဲ့တဲ့ အရမ်းကိုရှေးကျတဲ့ စားစရာလေးလို့ […]
မုန့်လုံးရေပေါ် ဒါကတော့ သင်္ကြန်မှာ မပါမဖြစ်တဲ့ ရိုးရာမုန့်တမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစု သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေ ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ထန်းလျက် ညှပ်သူကညှပ်၊ မုန့်လုံးသူက လုံး၊ ပြုတ်သူက ပြုတ်၊ စားသူက စား၊ လိုက်ဝေသူက ဝေနဲ့ […]
ထန်းသီးမုန့်ပြုလုပ်နည်းလေးဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ၁။ ဆန်မှုန့် ၁၅၀ ဂရမ် ၂။သကြား ၁၅၀ ဂရမ် ၃။ ထန်းသီးအမှည့်သီး အနှစ် ၆၀ ဂရမ် (သို့) ထန်းသီးမှည့်အနှစ် ရယ်ဒီမိတ်ဘူး ၄။ အုန်းနို့ ၂၇၀ ဂရမ် […]
ငရုတ်သီးစိမ်းငံပြာရည်ချက်နည်း ကြက်သွန်နီ၅လုံးနဲ့ကြက်သွန်ဖြူ၃မွှာလောက်ကိုညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ။ ပုဇွန်ခြောက်လက်တဆုပ်စာလောက်ကိုရေဆေးပြီးမညက်တညက်ထောင်းပါ။ငရုတ် သီးစိမ်း၁၀တောင့်လောက်ကိုသက်သက်ထောင်းထားပါ။ အိုးထဲကိုဆီလိုသလောက်ထည့်ပါဆီဆူလာလျှင်နနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထည့်ပါ ကြက်သွန်ဖြူနီထည့်ပြီးဆီသတ်ပါ အနံ့လေးမွှေးပြီးကြက်သွန်နီလေးနွမ်းလာပြီဆိုရင် ထောင်းထားတဲ့ပုဇွန်ခြောက်ကိုထည့်ပါ အရသာအတွက်ငံပြာရည် အချိုမှုန့် ကြက်သားမှုန့်ထည့်ပါ ငရုတ်သီးခွဲခြမ်းထမင်းစားဇွန်းနဲ့၂ဇွန်းလောက်ထည့်ပြီးမွှေပေးပါ ပြီးရင်ရေအနည်းငယ်ထည့်ပါ ရေလေးဆူလာပြီဆို ထောင်းထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးကိုထည့်ပြီးခနအုပ်ထားပါ ဆီပြန်လာပြီဆိုအရသာလေးမြည်းပြီးချလို့ရပါပြီ အသားဟင်းတောင်မလိုပဲတမျိုးထဲစားရင်တောင်ထမင်းမိန်တဲ့ဟင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ လေးစားလျှက်..crd. Credit. ငရုတသြီးစိမြးငံပှာရညခြကွနြညြး […]
ဆိတ်သားဟင်းချက်နည်း ပါဝင်ပစ္စည်း ဆိတ်သား ၅၀ သား ဂျင်း ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ နနွင်းမှုန့် ၊ ဆား ၊ ငရုတ်သီးမှုန့် (အနည်းငယ်) အသားမဆလာ ဆိတ်သား ကို ဂျင်း ၊ […]
ကြက်သားဖက်ထုပ်ပေါင်း အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ဖက်ထုပ်ပေါင်း ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် ဒီတစ်ခါမှာတော့ မိမိအိမ်မှာပဲ အလွယ်တကူလုပ်စားနိုင်တဲ့ ကြက်သားဖက်ထုပ်ပေါင်း ပြုလုပ်နည်းကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ဖက်ထုပ်လိပ်ရန် ဂျုံပြား အချပ် ၃၀ ခန့် ကြက်သား ၁ ပေါင် […]
ပင်လယ်စာတွေ ညှီနံ့မနံဘဲ အရသာရှိဖို့ ဒီလို ချက်ကြမယ်
ပင်လယ်စာတွေ ညှီနံ့မနံဘဲ အရသာရှိဖို့ ဒီလို ချက်ကြမယ် ပင်လယ်စာအညှီအနံ့ဆိုတာမှာ ကင်းမွန်၊ပြည်ကြီးငါးနဲ့ မွေးမြူရေးငါးတွေ ရေချိုငါးတွေရဲ့ အညှီနံ့က တစ်မျိုး၊ ကဏန်းပုစွန်တို့အနံ့ကတစ်မျိုးမို့ ဆေးရကြောရတဲ့နည်းတွေနဲ့ ချက်ပြုတ်ရာမှာ အမွှေးကြိုင်ခတ်တဲ့နည်းတွေကလည်း ကွဲပြားပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတွေကျတော့ အညှီကြောက်တဲ့ လူမျိုးဆိုတော့ကာ ပင်လယ်စာချက်တဲ့နေ့ဆိုရင် […]
ချဉ်ငန်စပ်လက်ဖက်သုပ် ….. တခြားနိုင်ငံတွေမှာ လက်ဖက်ဆိုတာ ရေနွေးကြမ်းအဖြစ် သောက်စရာတစ်ခုဖြစ်နေပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ လက်ဖက်ရွက်ကို သုပ်စားကြပြီး လူကြိုက်အများဆုံးအသုပ်တစ်မျိုးပေါ့။ ညီမတို့တော့ မိသားစုတွေဆုံပြီဆိုတာနဲ့ လက်ဖက်လေးသုပ်၊ရေနွေးကြမ်းလေးနဲ့ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ကြတာပဲ။ဒီတစ်ပတ်တော့ အိမ်မှာ သုပ်နေကျ လက်ဖက်သုပ်နည်းလေးကို ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ […]
ခဏခဏ နည်းမေးနေကြတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် ချက်နည်း
ခဏခဏ နည်းမေးနေကြတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် ချက်နည်း အိမ်မှာပဲ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ဒန်ပေါက်ချက်တဲ့နည်း လေး ပြောပြပါ လို့ ပြောကြ လို့ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထမင်း ပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် […]